Isimo sezulu kanye ne-allergies: izici, izimpawu nokuhlukahluka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amasosha omzimba womuntu angehluleka ukuhlumisa abantu futhi ngezikhathi ezithile futhi akhiqize ukungezwani komzimba. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi ukungezwani komzimba kubangela ukuthimula okuqhubekayo nokuyihlazo, isiminyaminya samakhala nekhala eligobhoza njalo, phakathi kweminye imiphumela. I- sezulu kanye komzimba zihlobene kubantu abaningi. Futhi kunabantu abanenkinga yokungezwani komzimba nokushintsha kwesimo sezulu.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokusabela okuvame kakhulu kusimo sezulu kanye nokwaliwa yizifo ezithile.
1 Isimo sezulu kanye ne-allergies
2 Izimbangela zesimo sezulu kanye ne-allergies
3 Ukuhlukahluka kwesimo sezulu
4 Umphumela womoya
Kulolu hlobo lwabantu, ukungezwani komzimba okuvame kakhulu kuba yi-rhinitis, i-allergen conjunctivitis nezinye izimpawu ezifana ne-dermatitis noma ezinye izimo ezinzima kakhulu. Uma sikhuluma nge-rhinitis, sisho ukuthimula okuqhubekayo okujwayele ukusithinta lapho sidalulwa kakhulu, ukuminyana kwamakhala okungasivumeli ukuba siphefumule kahle nokudonsa okungapheli ekhaleni. I-Rhinitis ingenye yezimpawu ezingemnandi kakhulu zokudlulisa ukungezwani komzimba. Ziyizimpawu ezicasulayo kakhulu ukuthi, kwesinye isikhathi, azisivumeli ukuba siphile impilo ejwayelekile. Ukulokhu upheka njalo, uthimula futhi kufanele ushaye amakhala akumnandi neze.
Esinye isibonakaliso sesimo sezulu kanye ne-allergies yi-conjunctivitis. Imvamisa banezimpawu ezifana namehlo alumayo futhi acasukile. Kukhona abantu abamehlo abo aphenduka umbala obomvu ojulile. Ku-dermatitis, i-eczema esikhunjeni nasemifubeni ingabangelwa. Ekugcineni, ezinye zezimo zezulu kanye ne-allergies zingaba zimbi kakhulu futhi zihlasele izinhlelo zokugaya ukudla nokuphefumula njenge Isifuba somoya.
Izimbangela zesimo sezulu kanye ne-allergies
Ukuba nokungezwani komzimba nezinguquko kusimo sezulu kuqhamuka ekulayisheni kofuzo nasemvelweni osizungezile. Sonke sinokuthambekela kofuzo ekuhluphekeni noma cha kusuka ekungezelweni komzimba kuya ezinhlotsheni ezahlukahlukene zomzimba Ezinye izinto eziphilayo zingahlanganiswa ngendlela yokuthi zenze amasosha ethu omzimba kwakha impendulo enehaba nengakhi ezintweni ezithile noma ezintweni ezithile okuthiwa ngama-allergener. Lapho isiguli sichayeke kulawa ma-ejenti, basesimweni sokuzwela ngokweqile ochungechungeni lwezinto zeselula nezamakhemikhali ezenza ukusabela ngezindlela ezahlukahlukene ngokusho komuntu ngamunye.
Izimpawu ezivame kakhulu yilezo ezishiwo ngenhla, kepha ukuqina nokuvama kwazo kuzoya ngohlobo lomuntu ngamunye nezinga lokuchayeka ku-allergen. Ama-Allergen yiwona ma-ejenti anesibopho sokungezwani komzimba. Lokhu kungaba: ukudla, imithi, izinhlayiya ezisemoyeni ezifana nempova, amakhemikhali, isikhunta, isikhunta, izibungu kanye nedander yezilwane, njll. Lapho la ma-allergen ahlangana nezinto eziphilayo, amasosha omzimba azibona njengezinto eziyingozi futhi azivikele ngokuhlasela, okuyizimpendulo zababukeka sengathi sikubalulile ngenhla.
Umoya ubhekene nokusabalalisa impova yezitshalo ukunweba indawo yokwabiwa kwezitshalo. Yingakho ukushintsha kwesimo sezulu kungadala ukungezwani komzimba. Futhi ukuthi lapho sishintsha izinkathi, kanjalo nemimoya, ukuqina kwayo nokuqondisa kwayo ngaphandle kwalokho izitshalo ziqala isigaba sazo sokuqhakaza. Lesi yisigaba sokuqhakaza lapho bekhiqiza khona impova ukuze ikwazi ukusakazeka endaweni.
Manje njengoba sesazi ukuthi izinto ezibangela ukungezwani komzimba zinesibopho sokuthi sibe nezimpawu zokungezwani komzimba, ake sibheke ukuthi isimo sezulu nezinto ezingezwani nomzimba zihlobene nani. Kumele siqonde ukuthi ukungezwani komzimba nokushintsha kwesimo sezulu uqobo akukho. Akukona ukuthi sizokwakha izimpawu ngaphambi kokushintsha kokunye kokuguquguquka kwesimo sezulu okuveza imvelo noma imvelo yomuntu esikhathini esithile. Lokhu akuyona uqobo i-allergen. Ezikhathini eziningi, ukuguquka kwesimo sezulu yikhona okubangela ukwanda kokuhlushwa kwama-aleji athile asemoyeni, nokuyinto enomthelela ekuphenduleni kwe-mucosa kwabaguliswa ukungezwani komzimba.
Sizohlaziya ukuthi yiziphi izinto eziguquguqukayo zesimo sezulu ezihlobene kakhulu nalezi zimpawu. Ukushintsha okungazelelwe kokushisa komoya nomswakama kuvame ukuveza izimpawu ezithile kulabo abaphethwe ukungezwani komzimba. Futhi lokhu kungenxa yokuthi i-mucosa iyasabela kulesi simo. Izinguquko zokushisa komoya nomswakama kungadala ukuvuvukala. Ngakolunye uhlangothi, amazinga okushisa aphansi akhiqiza ushintsho ekukhetheni kwamakhala kanye nobuchopho. Lokhu kusho ukuthi okungokwakho bazokwenza isivumelwano nezindonga zabo futhi banciphise izindlela zokuzivikela ngokwemvelo ngomoya. Lezi zinguquko zidala ukutheleleka kwamagciwane okuphefumula.
Uma sihamba ngenye indlela, sibona ukuthi intwasahlobo ilindele ukufika kwayo, ngoba kunezifundo ezithile eziqinisekisa ukuthi ezinye Izihlahla ezibolayo eSpain zihluma cishe ezinsukwini ezingama-20 ngaphambi kweminyaka engama-50 edlule. Lolu shintsho luguqula ukukhula kwezitshalo isikhathi eside sokuvota impova. Gcina ukhumbula ukuthi uma lokhu kuqhubeka, abantu abaningi abaphikisana nempova bazobhekana nale nkinga isikhathi eside unyaka ngamunye.
I-while ingenye yemingcele ebaluleke kakhulu yezulu okufanele icatshangelwe. Iphethe ukugqugquzela izinhlamvu zesikhunta kanye nempova emoyeni. Ezinsukwini lapho kunomoya omningi kakhulu wasentwasahlobo, akukhuthazwa ukuthi uphumele ngaphandle kubo bonke labo abanokungezwani nezinto ezithile komzimba. Ukusabalalisa nokuhlushwa kwezifo kuncike enhlanganisweni ekhiqizwa emoyeni. Ngokuya ngokuya ngejubane nangejubane layo, inani lezinhlayiyana elimisiwe lingenziwa futhi kufundwa nekhwalithi yomoya ukuze kutholakale izibikezelo zokuxwayisa ukuze kuzuze abanale nkinga yokungezwani komzimba.
Ngenxa yalokho, Namuhla sinedatha ekhombisa inani lempova esemoyeni namuhla usuku nosuku ukwazi ukuthi kufanele yini siphume njengesivikelo noma okungcono ukuhlala ekhaya ukugwema ukusabela ku-mucosa.
Isimo sezulu nokungezwani komzimba nakho kuhlobene nakho inani lomswakama, imvula nesithwathwa emvelweni. Futhi ukuthi lezi zinqubo zesimo sezulu zidala ukuhlunga noma ukuhlanzwa kwemvelo. Lokhu kusho ukuthi izinhlamvu zempova zibanjwa ngamaconsi emvula futhi, njengoba esinda, ziwela phansi zihlale zifakiwe. Kujwayelekile ukuthi uqaphele ukuthi abanalesi sifo entwasahlobo benza izimpawu zabo zibe zimbi kakhulu ezinsukwini ezinelanga nezishayayo, kuyilapho bethuthuka ezinsukwini ezinemvula.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwesimo sezulu nezinto ezingezwani nezinto ezithile emzimbeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isimo sezulu kanye ne-allergies